Macallinka Man United ee Solskjaer oo Ed Woodward u gudbiyey liiska xiddigaha uu doonayo in kooxda laga diro & Sanchez oo ka mid ah! – Gool FM
(Manchester) 21 Maarso 2019. Macallinka ku meel gaarka ah ee kooxda Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ayaa la soo warinayaa inuu maamulka kooxda u gudbiyey liiska xiddigaha uu doonayo in xagaagan naadiga laga diro waxaana ka soo dhex muuqday Alexis Sanchez.
Sanchez ayaa kaliya Man United kaga soo biiray Arsenal bishii Janaayo ee sanadii la soo dhaafay weliba heshiis uu todobaadkii mushaar ahaan ku qaadanayo 500,000 oo gini, laakiin waxa uu ku guuldarreystay inuu ismuujiyo illaa iyo hadda waxaana uu dhaliyey kaliya saddex gool 29 kulan oo uu Man Utd u ciyaaray horyaalka Premier League.
Xiddiga xulka qaranka Chile ayaa ku soo bilowday kaliya siddeed kulan oo horyaalka Ingiriiska ah xilli ciyaareedkan, waxaana saddex ka mid ah kulamadaas ay yimaadeen inta uu xukunka hayo macallin Solskjaer, taasoo keentay in la sheego in kooxda ay khasaari karto guulaheeda dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Jariiradda Daily Star ayaa warinaysa haatan in macallin Solskjaer uu u sheegay guddoomiye ku xigeenka fulinta kooxda ee Ed Woodward inay ka takhalusaan Sanchez xagaagan, waxaana liiska kula wehliya kabtanka kooxda ee Antonio Valencia iyo difaaca reer Argentine ee Marcos Rojo.
Solskjaer ayaan weli si joogto ah loogu magacaabin shaqada tababarennimo ee kooxda Man Utd, laakiin waxaa la filayaa in magacaabistaasi ay dhacdo dhowaan, waxaana macallinka reer Norwey wadahadal kula jirta kooxda qorshaha ku aaddan inay soo dhammeeyaan heshiiskiisa ku meel gaarka ah.
Kooxda Juventus ayaa la la xiriirinayaa inay u soo dhaqaaqi doonto Sanchez, kaasoo horey uga soo ciyaaray horyaalka Serie A gaar ahaan naadiga Udinese.